Ụlọ ọrụ ngwaahịa |Ndị na-emepụta ngwaahịa China, ndị na-eweta ngwaahịa
Akpa akpa mmiri na-adịghị na silicone bụ ihe dị mma maka ọzụzụ nkịta mgbe ọ na-apụ na nghọta.Enwere ike ibido akpa akpa nri nkịta a n'úkwù gị ma ọ bụ uwe ogologo ọkpa gị, jiri ọgwụgwọ nkịta jujuo ya, zụọ nkịta gị oge ọ bụla, ebe ọ bụla, ma hapụ nkịta ka ọ gee gị ntị.
Ebe a na-eme achịcha na-adịghị mma dị elu nke nwere ike iji silicone eme ihe
Ọtụtụ ojiji: Enwere ike iji mgbanaka anwansi a maka kichin, ịsa efere, ihicha mkpụrụ osisi & akwụkwọ nri, ihicha ụlọ ịsa ahụ, ihicha ụlọ akwa, wepụ uzuzu uwe, na-elekọta ntutu anụ ụlọ, ịsa ụgbọ ala wdg.
Silicone gbapụta ya akpa pensụl dị mfe
The Pop it bag bụ nke elu-edu gburugburu ebe obibi enyi na enyi nri ọkwa silicone akụrụngwa, Ọ bụ mma, gburugburu ebe obibi enyi na enyi, ahụ ike, na odorless. Ma ọ bụ vasatail! The pensụl akpa nwere ike iji dị ka sensory ụmụaka egwuri egwu ma ọ bụ fidget ụmụaka, na ọ nwere ike. a ga-ejikwa dị ka akpa nchekwa akwụkwọ, akpa ịchọ mma, na akpa mkpụrụ ego.
Nke a mara mma nwa giraffe ezé ga-ebelata ihe mgbu nke ịta ezé maka ụmụ ọhụrụ.Ịta ahụhụ ọ bụla ga-enyere aka ibelata mgbu chịngọm na n'enweghị nsogbu na ịkwalite mmepe nke ezé nwa na agba elu.E jiri ya tụnyere ngwaahịa ezé nke ihe ndị ọzọ, ọkpụkpụ silicone a dị nchebe ma nwee ọdịdị dị n'elu, nke dị mma maka ịzụ ụmụ ọhụrụ.
Ngwa ahịa BBQ na-ekpo ọkụ na-ere mmanụ silikone na-eji ahịhịa ahịhịa na-acha uhie uhie.
Akpa Popit shoulder bụ ihe ejiji na ewu ewu, akpa fidget a abụghị naanị ihe na-atọ ụtọ, kamakwa ọ nwere ike ijide ọtụtụ ihe anyị ga-apụ apụ, dị ka ekwentị mkpanaaka, akwụkwọ mposi, ntị ntị, igodo na lipstick, na-ebu ya n'okporo ámá, ọnụ ọgụgụ nke ịlaghachi azụ dị elu nke ukwuu.
Aha ngwaahịa: Akpa Fidget Akpa Ubu
Nha: 13.5 * 18.5 * 3 cm
Njirimara: Waterproof; Na-adịgide adịgide
Ọnụahịa otu: 3.1-3.4 USD